I-china B008 solar garden light_9.7V lithium battery manufacturers kanye nabaphakeli | I-Hangchi
I-AntarCS Solar Bollard Aluminium powder embozwe isiphetho se-satin grey
• Ibanga lezentengiselwano ukukhanya kwelanga
• Kudinga ukushaja amahora angama-10-12 ngaphambi kokusetshenziswa
• Ikhwalithi ephezulu ye-LiFePO ^ eyakhelwe ngaphakathi
• Ilungele izindlela ezikhanyayo nezindawo zokuhamba
Imininingwane Pole S0LP0LE010, Wall S0LWALL010, Insika S0LPILL010, Bollard S0LB010
• Umbala I-Powdercoat satin emnyama • Iphaneli yelanga 9V 6watts
Time Isikhathi sokushaja Amahora 4-6 • Usayizi wePhaneli Solar 230Hx230Wmm
.CCT 4000K (emhlophe epholile) ・ Umthombo Wokukhanya Ama-LED angama-36 aphezulu
• Usayizi weBollard 800H x 275Wmm (phezulu) ・ Ibhethri LiFePO ^ ibhethri
・ Ukugqama Okusondele. Okukhipha i-lumen kwe-350 • Okubalulekile I-Aluminium, i-polycarbonate diffuser
Kuyini iLumen? Ngamazwi alula, ama-Lumens ayisilinganiso senani eliphelele lokukhanya okubonakalayo okuvela kusibani noma kumthombo wokukhanya. Ukuphakama kwesilinganiso se-lumen, kuzovela isibani 〃b 「ighte「 〃. Lokhu kuqhathaniswa kanjani neminye imithombo elula? Izibonelo ezijwayelekile • Imaglite yebhethri yeseli ejwayelekile engu-4 x D izokhipha i-approx. Ama-lumens angama-70
Umgomo osebenzayo wokukhanya kwensimu elanga ngukuthi ipaneli yelanga imunca amandla elanga (amandla alula) emini bese iguqula amandla okukhanya abe ngamandla kagesi bese iwugcina kubhethri elishajekayo. Lapho umbala wosuku umnyama, ukukhanya kwelanga kuvuleka ngokuzenzakalela bese kuqala ukukhanyisa, futhi umbala wosuku uqala ukushintsha ekuseni ku-On, ukukhanya kuyazicima, bese kuqala ukushaja. Ingasetshenziswa kuzimo zesicelo ezinjengezivande zegceke, izindawo ezinhle, nezindawo zokuhlala abantu.
Amandla aluhlaza, akukho ukungcola;
Akunasidingo sokudonsa ucingo, luphephile futhi luthembekile, kulula ukuhambisa futhi kulula ukubeka;
Ukusebenza isikhathi eside nezindleko eziphansi;
Amandla elanga angasetshenziswa iminyaka emi-5 kuya kwengu-10, ama-diode akhipha ukukhanya kwe-LED asebenza isikhathi eside;
Ukusebenza kahle kwesekethe, ukonga amandla nokonga imali;
Impilo yomkhiqizo omude.
Ngaphezu kwalokho, i-lithium battery adjustable solar panel bracket esetshenzisiwe ingalithuthukisa kakhulu iqoqo lokukhanya; kulula ukufaka ngqo ngaphansi kwephaneli lelanga, ngosayizi omncane nokukhanya kwesisindo, ukunciphisa izindleko zokwakha; impilo ende yokusebenza, okuyibhethri lendabuko lokugcina amandla-i-asidi izikhathi ezingama-3-5; kungathinteki kakhulu ukushisa, ikakhulukazi ukumelana namazinga okushisa aphezulu naphansi; ngaphandle kwalokho, ukusebenza ngaphandle kwesondlo kuhle.
Imiklamo Yokukhanyisa Solar
Langaphambilini 2713 uchungechunge yelanga utshani ukukhanya engadini
Olandelayo: G001 solar lawn light 5 years warranty
I-SWL-16 (MARS 3) ukukhanya kwelanga elangeni okugcwaliseka kabusha ngu ...
Ukuphakama kokusebenza kahle kwebhethri ye-gel yelanga
I-PNG 144P 9BB ukusebenza kahle kwephaneli lelanga iseli b ...
I-PV1800 PRO chungechunge-450v / 240v / 110v ivaliwe igridi yelanga ...
I-PNG120M 9BB PV yesistimu yelanga
IBASALT SOLAR STREET LIGHT